Dhaqdhaqaaq ciidan & abaabul dagaal oo ka oogan magaalada Muqdisho – SBC
Dhaqdhaqaaq ciidan & abaabul dagaal oo ka oogan magaalada Muqdisho
Abaabul & guluf colaadeed ayaa la soo sheegayaa inay wadaan mid ka mid ah qaybaha isku haya gacan ku haynta magaalada Muqdisho ee caasimada ah.
Xarakada Al-Shabaab ayaa la xaqiijiyey inay wado maalmihii ugu dambeeyey abaabul ciidan & dagaal oo ay ugu diyaargaroobayaan dagaalo ay ku qaadaan xarumaha ciidamada AMISOM ee midowga Afrika ka socda & ciidamada dawlada KMG Soomaaliya.
Abaabulkan dagaal ayaa saraakiil ka tirsan kooxda Al-Shabaab waxay ku sheegeen in ay ku soo beegayaan bisha barakeysan ee Ramadaan, iyadoo khudbado loo jeediyey xoogaga Shabaabka loo sheegay inay u diyaargaroobaan sida hadalka loo dhigay fadliga bisha Ramadaan oo la galo Jihaad.
Warar SBC ka heshay ilo wareed oo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in maalmihii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqa Shabaabku ciidamo ku soo daabulayeen gudaha magaalada Muqdisho, iyadoo goobaha ay ku sugan yihiin laga dareemayo abaabul ciidan & u diyaargarow dagaal kaasi oo la aaminsan yahay in uu la xiriiro dagaalada inta badan ay kooxdaasi xoojiyo xili kasta oo la soo gaaro bisha Ramadaan.
Gulufkan ciidan ee Shabaabku wadaan ayaa ku soo aadayaa iyadoo bilihii ugu horeeyey ee sanadkan laga qabsadey deegaano fara badan oo hawlbowle ah oo ku yaal degmooyinka Hodan, Howlwadaag, Wardhiigley & Boondheere ka dib dagaalo culus oo ay la galeen ciidamada AMISOM & kuwa dawlada KMG Soomaaliya oo isgarabsanaya.
Ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dawlada KMG oo la xiriira abaabulka & gulufka colaadeed ee ay wadaan xoogaga Shabaabka.
Alshababku waligood waxay ka taliyaan lugooyada umaadan somaliyeed ee la ildaran dagaalo aan dhamaad lahayn ramadaan kastana waxay ku tala galaan inay dabar jaraan shacab aan waxba galabsan ee sooman ilaah waxa uga rajaynaya shacabkaan guul noleeed aduun iyo aakhiro iyo inuu ka qabto alshabab